Ny vokatra mitohy | Reef Resilience
Aorian'ny fisian'ny haintrano izay mitarika ho any amin'ny fiainana an-tany, dia mety hihena ny toeram-piasana ny harambato iray. Ny fihenan'ny fihenam-bidy dia afaka mampihena ny fonenan'ny trondro ihany koa, miaraka amin'ny fiantraikany amin'ny jono mitodika amin'ny vatohara. Sary © Stacey Kilarski, Tailandy
Ny fandrakofana mivantana sy ny fiainana an-tany dia tsy misy fiantraikany ratsy eo amin'ny vondrom-piarahamonina haranona ihany, fa koa ny fiantraikan'ny fiarahamonina sy ny fiarahamonina olombelona miankina amin'ny haran-dranomasina sy ny fisian'ny fisotroan-dronono ho an'ny fivelomana sy ny fahasalamana.
Fiantraikany ara-tontolo iainana ny fanalan'ny vatohara sy ny mety maty:
Mety hanjary hampihenana ny taham-pivoarana ny vatohara lavalava, hampihena ny fahaiza-manao eo amin'ny fananahana, ny fitombon'ny aretina ary ny tahan'ny fahafatesana.
Azo atao ny fiovana eo amin'ny fiaraha-monina momba ny haran-dranomasina raha misy karazan-tsakafo faran'izay malemy maty novonoina tamin'ny fisakafoanana.
Ny fiovan'ny fiaraha-monina coral dia misy fiantraikany amin'ny karazana miankina amin'izy ireo, toy ny trondro sy tsy fahampian-tsakafo izay miankina amin'ny vatohara mivelona ho an'ny sakafo, fialofana, na toeram-ponenana. Ny fanovana ny habetsahana sy ny fananganana ny fivarotan'ny hazandrano dia mety hitranga rehefa maty noho ny vatohara ny coral.
Ny tsy fahampian'ny fahasamihafana sy ny karazana dia mety hitranga rehefa maty ny vatan'ny maty noho ny fahakiviana.
Ny haran-dranomasina salama dia manintona mpitaingina sy mpizaha tany hafa. Ny haron-dranomasina matevina sy simba dia mety manakivy ny fizahan-tany, izay mety hisy fiantraikany amin'ny toekarena ao an-toerana. Sary © Paul Marshall
Fiantraikany amin'ny fiaraha-monina ny fanalan'ny vatohara sy ny mety maty:
Ny haran-koditra manjavozavo dia tsy afaka manome ny tolotra ara-tontolo iainana izay miankina amin'ny fokonolona eo an-toerana. Ohatra, ny haran-dranomandry manimba dia tsy dia mamokatra loatra ary mety tsy ho afaka hanamora ny fiantraikan'ny fiatoana ilaina mba hiantohana ny haran-dranomasina hanohy ny fiarovana ny seranan-tsambo.
Ny haran-doza ateraky ny fivalanana amin'ny haran-dranomasina dia mety hamoy haingana ny maro amin'ireo singa izay manamarina ny fikarakarana haingam-panahy izay manan-danja amin'ny fizahan-tany hamboly. Ny fahaverezan'ny fidiram-bola avy amin'ny fihenan'ny mpizahatany dia mety handrahona ny fiveloman'ny mponina eo an-toerana.
Ny fitrandrahana harena voajanahary izay mitarika ho amin'ny fiainana an-tany manan-tantara dia afaka mitondra fiovana goavana eo amin'ny fiaraha-monina trondro. Izany dia afaka handika karazan-tsakafo ho an'ny mpanjono mitandrema amin'ny karazana trondro eny amin'ny haran-dranomasina, izay mitarika ho amin'ny fiantraikany amin'ny famatsiana sakafo sy fiaraha-miasa ara-toekarena.
Ny soatoavina ara-kolontsaina ao amin'ny vondrom-piarahamonina nosy tropikaly (ohatra, tranonkala ara-pivavahana sy fampiasana nentim-paharazana momba ny harena an-dranomasina) dia miankina amin'ny fiompiana voajanahary voajanahary matavy ary mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fanala mihintsan-dravina.
Ny vatoharan-dranomasina dia loharano azo avy amin'ny famonoana fanafody. Ny harafesina sy ny maty maty dia tsy dia ilaina loatra ho loharano loharanom-pahasalamana manan-danja (izany hoe zava-mahadomelina ho fitsaboana aretim-po, kansera ary aretina hafa).
Saika ny zava-drehetra ao anaty fiompiana haran-dranomasina dia miankina amin'ny haran-koditra, na amin'ny rafitra vatosoa amin'ny fomba sasany. Ny zanatanin'ny Coral dia manome loharano sakafo sy fialofana ho an'ny organisma maromaro mifandray amin'ny vatohara ary ny fahasalaman'izy ireo dia manan-danja lehibe amin'ny fiaraha-monina an-dranomasina. Hitan'ny mpahay siansa fa mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fiaraha-monina trondro ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny fihenan'ny vatohara. Ohatra, fianarana tany Papouasie-Nouvelle-Guinée ref dia nampiseho ny fihenan'ny fiarahan'ny trondro taorian'ny fialantsiny tamin'ny fiaraha-monina coral. Fanampin'izany, ny fanadihadiana dia nanolo-kevitra fa ny trondro tanora dia mety hamerina kokoa any amin'ny faritra izay misy ny vatohara avo be. Ny vokatra mitovitovy amin'ny fihenan'ny isan'ny trondro dia ny fanamafisana ny haran-dranomasina marobe koa dia hita any amin'ny faritra hafa, toy ny Great Barrier Reef, ref Tanzania ref sy ny Seychelles. ref Ny fizotran'ny fitrandrahana amin'ny karazan-trondro dia voarakitra an-tsoratra (ohatra, avy amin'ny fanoheran'ny karazan-trondro hazandrano ho an'ireo karazana trondro tsy dia misy karazan-trondro) aorian'ny fisian'ny hain-trano. ref
Ny fiantraikan'ny vatohara ho an'ny vatohara dia manan-danja tokoa amin'ny fiarahamonina izay miankina amin'izy ireo. Ny olona dia miankina amin'ny vatohara ho an'ny sakafo, fidiram-bola ary fifaliana. Olona an-jatony tapitrisa no miankina amin'ny fomba sasany sakafo sy tolotra omen'ny haran-dranomasina, ary mihoatra ny 100 tapitrisa miankina mivantana amin'ny vatohara ho an'ny velona.
Ny fanandramana hametrahana sanda dolara amin'ny vidin'ny gliôla amin'ny haran-dranomasina dia manondro fa mety hilefitra amin'ny $ 20 miliara (miala amin'ny fahamendrehana) mankany amin'ny $ 84 miliara (mangatsiaka marefo) ao amin'ny Net Present Value (mihoatra ny taona 50 taona) . Ny fatiantoka ho an'ny fizahan-tany dia avo indrindra ($ 10 miliara - $ 40 arivo lavitrisa), arahin'ny fisarohana ($ 7.0 miliara - $ 23.0 miliara), ary ny biodiversité ($ 6 miliara - $ 22 miliara). ref